Sida loo Beddelaan Music Video in MP3?
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Music Video in MP3
Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo videos music in MP3 si loo badbaadiyo meel lagu kaydiyo ama haddii kale oo aad rabto in aad si toos ah u soo bixi qaar ka mid ah music cabsi badan ka videos music internet-ka, sida YouTube - Waayo, shaqooyin, uma baahnid inaad u baahan tahay laba qalab kala duwan. Xaaladaha sidan oo kale ahi, kaliya aad u baahan hal qalab awood badan, si ay kaaga caawiyaan in aad ka mid music video Macdan MP3 music, labada videos online music ama kuwa aad kombuutarka.
Qalabkani waxa uu awood badan yahay Streaming Audio Recorder . Isticmaal in si toos ah loogu badalo online music video in MP3. Laakiin haddii videos music waa in aad kombuutarka, waxaa sidoo kale awood siinaysa in aad soo saaro MP3 ka videos music, sida Converter MP3 ah. Kuwani waa sababaha ugu weyn ee aan si adag ugu talinaynaa app this:
1. U beddelaan wax music video in MP3, internetka ama offline.
2. ilaali tayada asalka audio. Sida aad ogtahay, haddii aad kala qaybsan tahay video Macdan MP3 ay u isticmaalayaan fiidiyowga si ay MP3 Converter, waa ay fududahay in ay sababi gaartay audio.
Kuwa soo socda waa tutorial faahfaahsan oo ku saabsan sida loo badalo music video in MP3 si hufan iyada oo la isticmaalayo Streaming Audio Recorder.
Waxaad si toos ah u heli kartaa adigoo gujinaya xiriirka hoose. Markaasaa file .exe soo bixi dhuftay si loo soo dajiyo barnaamijkan.
2 Bilow si loogu badalo Music Video in MP3
App waxaa loogu tala galay in lagu soo qabto audio dhex kaarka codka your computer ee. Sidaas daraaddeed iska jira ma jiraan wax ciyaaryahan kale audio laakiin video music lagu jiro qoro.
Hadda, aan bilowno app this. Waxaad arki doonaa a "Record" button in kooxda top-bidix ee ay interface ugu weyn. Markaas ka heli iyo ciyaaro video music internetka ama offline.
Taasi waa. App waxaa lagu qoro video music ciyaartoyda. Ma waxaad u eg yahay? La yaabka leh, miyaanay ahayn? Marka video music ka joogsanayso ka ciyaaro ama mar kale aad ku dhufatey "Record" button, duubay joojin doonaa si waafaqsan. Oo weliba waxaad ka heli doontaa file maqal ah in Streaming Audio Recorder maktabadda 's.
Sidaas si ay u helaan music video dhameystiran diiwaan file a MP3 joogto ah, waxaad u baahan tahay in la sameeyo video music sami ah u ciyaaro inta lagu jiro qoro.
Ma doonaysaa in la ogaado meesha file MP3 waa in aad kombuutarka? Ok, waxaad tagtaa maktabada this app ee, iyo xaq-riix wadada diiwaan audio, ka dibna dooro "Open ee folder" si aad u hesho file MP3 ah. Waa mid aad u fudud, soo maaha?